Ciidamada DFS iyo kuwa AMISOM oo la wareegay Degmada Mahadaay iyo Jowhar
Jowhar:-Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya gobalka Sh /Dhexe ayaa sheegaya in ciidamada AMISOM iyo kuwa DFS ay saaka weerar ku soo qaadeen magaalada Jowhar ee xarunta gobalka Shabeelaha Dhexe waxaana u suurto gashay in ay la wareegaan magaalada Jowhar ka dib markii ay halkaas isaga baxeen ciidankii Al-Shabaab.
Inta aysan soo galin ciidanka AMISOM iyo Kuwa DFS magaalada Jowhar ayaa waxaa ka dhacday bililiqo baahsan oo loo geystay xarumuhii iyo xafiisyadii Ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen magaalada Jowhar ee xarunta gobalka Sh/Dhexe.
Ciidamada DFS iyo kuwa AMISOM ayaa la sheegay inay haatan ku sugan yihiin Saldhiga Degmada Jowhar ee xarunta ,Garoonka diyaaradaha iyo xeradii hore ee ciidamada Dowladda ee Congo.
Ciidamada DFS iyo kuwa AMISOM ayaa sidoo kale sheegay in ay la waregeen gacan ku haynta Degmada Mahadaay ee Gobalka Shabeelaha Dhexe iyada oo la soo sheegayo in ciidamadii Al-Shabaab ay u baqooleen Degmada Buulo burde ee Gobalka Hiiraan halkaas oo ay ku sugan yihiin Masuuliin ka tirsan Ururka Al-Shabaab.
Magaalada Jowhar ee xarunta gobalka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ka dhacay laba qarax oo lala eegtay ciidamada AMISOM ee markaas soo galayey magaalada Jowhar waxayna ka kala dhaceen deegaanka Uno ee Xaafada Horseed iyo gudaha Saldhiga Booliska Degmada Jowhar ilaa haatan lama oga khasaaraha ka dhashay qaraxyada ka dhacay gudaha Degmada Jowhar.